Isdhexgalka iyada oo loo marayo daruuraha: Sidee loo gaaraa? | Laga soo bilaabo Linux
Horumarka hadda jira ee Teknolojiyada Macluumaadka iyo Isgaarsiinta (ICT) ayaa soo rogay adduunka casriga ah, gaar ahaan dhinaca bixinta ganacsiga, adeegyada ganacsiga iyo adeegyada maaliyadeed, mid dawladeed iyo mid gaar loo leeyahayba, oo loogu danaynayo dadka isticmaala (macaamiisha iyo muwaadiniinta), Baahida loo qabo Nidaamyada Macluumaadka (IS) in ay si isa soo taraysa u wada shaqeeyaan.
Ogow oo si buuxda u faham mid kasta oo ka mid ah walxaha ku xeeran arrinta Is-dhexgalka Nidaamyada Kombiyuutarka, iyada oo loo marayo daruuraha (Internetka), waa u muhiim qof kasta, caadi iyo xirfadleba, tan iyo inta la xoojinayo isdhexgalka ka dhexeeya Ururada dhexdooda, iyo kuwan iyo Dowladaha horumarinta barnaamijyada ama adeegyada, iyo mid kasta oo ka sii wanaagsan oo isdhexgal ah, xiriir iyo dhammaystir, waxay ka dhalan doontaa taageero ballaaran oo muwaadin ah, iyo sidoo kale, horumarinta tayada nolosha dadka oo dhan.
3.1 Isdhexgalka Semantic
3.2 Is dhexgalka ururada
3.3 Wada shaqeyn farsamo
3.4 Is-dhexgalka Maamulka
Ku habboonaanta in la wadaago xogta (macluumaadka) si guud oo hufan, taasi waa, iyadoo aan loo eegin tiknoolajiyada taageerta keydinta, farsamaynta ama qaybinta, Waxay la socotaa isbeddelka aadanaha iyo horumarka ICT illaa iyo bilowgeedii. Wax kasta oo uu abuuray Aadanaha laga soo bilaabo qorista (waraaqaha, tirooyinka, halbeegyada waqtiga) illaa Warbaahinta hadda jirta (Saxaafadda, Raadiyaha, TV-ga iyo Internet-ka) waxay leeyihiin ujeeddada muhiimka ah ee lagu gaarayo xiriir, wadahadal iyo isfaham.
Sidaa darteed Horumarinta ama hagaajinta xaaladaha (teknoolojiyada, qalabka, aaladaha) ee isdhaafsiga macluumaadka waa inay ahaataa mid ka gudubsan xagga ururada iyo hay'adaha iyo waddan kasta guud ahaan., si loo gaaro horumarinta xalalka kombiyuutarka ee ka gudbaya xaddidnaanta iyo khaladaadkii hore. Xaddidaadaha iyo khaladaadka ay abuureen horumarka tikniyoolajiyadeed ee ku saleysan baahiyaha gaarka ah (shuruudaha), taasoo dhalisay "Jasiiradaha Kumbuyuutarka".
Jasiiradaha kombiyuutarka ee lagu yaqaan waxqabadka aan habboonayn iyo iskudhafka macluumaadka, taas oo ficil ahaan ka dhigaysa isdhexgalka dhexdooda ah mid aan macquul aheyn oo ka hortagaya, tusaale ahaan, in nidaamka gobolka uu muwaadinku ku fulin karo hal meel. Sababtaas awgeed, tusaale ahaan, dawladuhu waxay raadinayaan inay dejiyaan daaqado hal elektaroonik ah oo Gobolka ah si muwaadiniinta iyo ururadu ugu fuliyaan nidaamyadooda khadka tooska ah. Ururradu waxay raadinayaan inay ka dhigaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda mid iswaafajinaya oo caalami ah marka loo eego kuwa dadka kale.
Tanina waa si sax ah halka fikradda isdhexgalka ka dhex muuqanayso. Fikradda yeelan kara tarjumaado badan oo leh kala duwanaansho yar, laakiin in xaalado badan badanaa lagu muujiyo sida:
"Awoodda Nidaamyada ICT-ga, iyo howlaha ganacsi ee ay taageeraan, in la isweydaarsado xogta isla markaana ay suurtagal ka dhigto in la wadaago macluumaadka iyo aqoonta". (ECLAC, Midowga Yurub, 2007) (Lueders, 2004)
ISO / IEC 2382 Erayada Macluumaadka iyo Teknolojiyada waxay ku qeexaysaa fikradda Isdhexgalka sida:
Awoodda isgaarsiinta, fulinta barnaamijyada, ama u kala wareejinta xogta inta u dhexeysa qeybaha kala duwan ee waxqabadka si uusan isticmaalehu ugu baahnayn inuu ogaado astaamaha u gaarka ah cutubyadan. (ISO, 2000)
Dadka kale, gaar ahaan heerarka dowladda ama heerarka siyaasadeed, qeexitaanka Isdhexgalka waxaa badanaa lagu qeexaa:
«kartida ururada kala geddisan iyo kuwa kaladuwan si ay ula falgalaan ujeeddooyinka la isku raacay. Isdhexgalka wuxuu muujinayaa in ururada ku lug leh ay wadaagaan macluumaadka iyo aqoonta iyada oo loo marayo Nidaamyada Hay'adaha, iyada oo loo marayo isweydaarsiga elektiroonigga ah ee macluumaadka u dhexeeya nidaamyadooda tiknoolajiyada macluumaadka ".
Wax inta badan loo fasiro, sida raadinta dawladuhu ku doonayaan inay si habeysan u siiyaan adeegyo bulsho oo ka wanaagsan kana wanaagsan bulshooyinkooda (Muwaadiniinta iyo Ururrada) oo u hoggaansamaya mabaadi'da Diiwaangelinta Diiwaangelinta (si looga fogaado nuqul ka mid ah Codsiyada Macluumaadka ama Nidaamyada), iyo Daaqad Kali ah (si looga fogaado khalkhalka hay'adeed ama wasiirnimo iyo isku xirnaan la'aanta).
Qoraalada qaarkood waxay badiyaa u qaybiyaan Isdhexgalka 4 weji ama nooc, kuwaas oo ah:
Waxay ka walaacsan tahay hubinta in macnaha saxda ah ee macluumaadka la isweydaarsaday la fahmi karo si aan mugdi ku jirin dhammaan codsiyada ku lug leh macaamil gaar ah waxayna u saamaxdaa nidaamyada inay isku daraan macluumaadka la helay ilaha macluumaadka kale oo ay markaa si habboon ugu shaqeeyaan.
Is dhexgalka ururada
Waxay mas'uul ka tahay qeexidda ujeeddooyinka ganacsiga, qaabeynta qaababka iyo fududeynta wada shaqeynta maamullada doonaya inay isdhaafsadaan macluumaadka waxaana laga yaabaa inay leeyihiin qaabdhismeedyo urureed oo kala duwan iyo hawlo gudaha ah. Iyo hagitaan, iyada oo ku saleysan shuruudaha bulshada isticmaaleyaasha, adeegyada ay tahay in la helo, si fudud lagu garan karo, la heli karo oo ku wajahan adeegsadaha.
Wada shaqeyn farsamo
Wuxuu daboolayaa arrimaha farsamada (HW, SW, Telecom), oo lagama maarmaan u ah isku xidhka nidaamyada iyo adeegyada kombiyuutarka, oo ay ku jiraan dhinacyada muhiimka ah sida isweydaarsiga furan, adeegyada isku xidhka, isdhexgalka xogta iyo qalabka dhexe, soo bandhigida xogta iyo isdhaafsiga, marin u helka iyo adeegyada amniga
Markay Dawladuhu (Dawladuhu) ku lug leeyihiin hawsha Isdhexgalka, wejigan ama noocaani wuxuu dhacaa taas waxay loola jeedaa heshiisyada dhexmara dawladaha iyo jilayaasha ku hawlan geeddi-socodka wada-shaqaynta iyo sida loo gaadho. Maamulka, waxaa loogu talagalay in mas'uuliyiinta dowladdu ay yeeshaan qaabdhismeedka hay'adeed ee lagama maarmaanka u ah dejinta heerarka is-dhexgalka, hubinta in la qaato, iyo in hay'adaha la siiyo awood urureed iyo farsamo oo lagama maarmaan u ah inay ku dhaqmaan.
Waxaa jira tiknoolajiyado badan oo jira si loo gaaro geedi socodka wada shaqeynta, gaar ahaan heerka dowladda. Mid ka mid ah sida caadiga ah waa isticmaalka Adeegyada Webka (Adeegyada Webka ama WS), kuwaas oo aan ka badnayn xirmo hab maamuusyo iyo istaandarro u adeega isweydaarsiga xogta u dhaxeysa barnaamijyada (Apps).
WS waxay fududeyneysaa isdhaafsiga xogta inta udhaxeysa Barnaamijyada kala duwan lagu soo saaray luuqado barnaamijyo kala duwan, laguna fuliyay barnaamijyo OS kala duwan, si loogu soo bandhigi karo Qalab kasta, Qalab ama Madal kasta oo ku xiran internetka. WSs waa nooc shaqo oo cusub oo loogu talagalay barnaamijyada si ay ula xiriiraan midba midka kale iyadoo la adeegsanayo internetka.
Una keen faa'iidooyin qiimo leh habka wada shaqeynta tan iyo markii ay u oggolaanayso barnaamijyadu iyadoon loo eegin astaamahooda ama barnaamijkooda fulinta inay isgaadhsiin ku sameeyaan, iyada oo loo marayo dejinta heerar iyo hab maamuusyo qoraal ku saleysan, fududeynta marin u helidda waxyaabaha ay ka kooban tahay (Macluumaadka / Xogta) iyo fahamka saxda ah ee hawlgalkeeda.
Heerarka ugu isticmaalka badan ee WS waxaan haynaa:
XML: XML (Luqad Calaamayn Dheeraad ah)
SAABUUN: SOAP (Hab maamuuska Helitaanka Shayga Sahlan)
WSDL: WDSL (Luqadda Sharaxaada Adeegyada Webka)
UDDI: UDDI (Sharaxa Universal, Discovery and Integration)
Noocyada ugu caansan ee WS waa:
Adeegyada Shabakadda ku saleysan SOAP: Taasi waxay adeegsaneysaa farriimaha XML ee soo raacaya heerka SOAP, iyo adigoo adeegsanaya WSDL qaabkooda.
Adeegyada Websaydhka ee RESTful: Ka faa'iideysiga HTTP, URI, MIME, si loogu hirgeliyo kaabayaal fudud ama aan aad u adageyn.
Raadinta wada-shaqeynta nidaamyada kala duwan, ha noqoto mid dowladeed ama mid gaar loo leeyahay, ama dhexdooda, waxay ku kordhin kartaa hab wanaagsan, faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka, bulshada ama ganacsiga, sida ugu badan ee muwaadinka fudud, sida khabiirka khibradda leh ama ganacsade weyn ama hoggaamiye siyaasadeed.
Isku duubnaanta heshiisyada, geeddi-socodka iyo qaabdhismeedyadu waxay hagaajin karaan awoodda bixinta iyo qancinta alaabada, wax soo saarka iyo adeegyada ku filan, yareynta saameynta qaladaadka suurtagalka ah ee waqtiga, hawlgallada ama iswaafaqla'aanta.
Dhamaan jagooyinka kor ku xusan Isdhexgalka oo ah cunsur muhiim u ah in qof walba la siiyo tayada adeegyada lagama maarmaanka u ah dadweynaha iyo adeegyada gaarka loo leeyahay, si hufan oo ugu kharash yar. Yaraynta waxqabad la’aan, nuqullo, jahwareer iyo xitaa kharashyo dheeri ah.
Xitaa mararka qaarkood, ku guuleysashada kororka helitaanka xitaa heer sare oo macluumaad ah iyo shaqeyn waxtar leh, laga bilaabo deegaan keliya qaab wax ku ool ah oo la isku halleyn karo, taas oo ah, in si ka waxtar badan, faa'iido leh, furan, ammaan ah, gaar loo leeyahay, oo dabacsan oo lagu tartami karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Isdhexgalka iyada oo loo marayo daruuraha: Sidee loo gaaraa?
DragonRuby: Qalab iskudhaf ah oo loogu talagalay sameynta ciyaaraha fiidiyowga ee Ruby